Fact Check: အစိုးရမဖွဲ့ဖို့ လွှတ်တော်မခေါ်ဖို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးအမိန့်ပေးတယ်လို့ သတင်းတုသတင်းမှားဖြန့် - Factcrescendo Myanmar
အစိုးရမဖွဲ့ဖို့၊လွှတ်တော်မခေါ်ဖို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)က အမိန့်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူ ထောင်ဂဏန်းက ပြန်လည်မျှဝေထားတွေ့ရပါတယ်။
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ပို့စ်တွေမှာ “တပ်မတော်မှ နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးသားထားပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံး (ကြည်း)က အမိန့်အမှတ် ၅/၂၀၂၁ နဲ့ စာထုတ်လိုက်ပြီး အစိုးရဖွဲ့ ခွင့်မပြုကြောင်းနဲ့ လွှတ်တော်ခေါ်တာခွင့်မပြုကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။
ဒီလိုရေးသားမျှဝေနေတာဟာ အတုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တပ်မတော်အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဉက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက အတည်ပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကို နားလည်မှုလွဲမှာစေနိုင်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရပါတယ်။
“တပ်မတော်မှ နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း
၁၅ . ၁ . ၂၀၂၁
10း00 AM
အကြောင်းအရာ ။ ။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲ မသမာမှုများ
တိုင်း ဒေသကြီးအလိုက် ဖြစ်ပေါ်နေလျှက်ရှိသည်များကို စီစစ်
တွေ့ရှိနေရခြင်းဖြစ်နေသည့် အခြေအနေပေါ် မိမိတို့ပြည်သူများ
ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ဥပဒေအပေါ်ယုံကြည်မှုအား အလွဲသုံးစားမဖြစ်
စေရေးအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် အထက်ပါ အကြောင်းအရား
များကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်းမပြုပဲ
အစိုးရဖွဲ့ခြင်း ၊ လွှတ်တော်ခေါ်ယူခြင်းများနှင့် ဥပဒေချိုးဖောက်
ခြင်းများအပေါ် တပ်မတော်မှ နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးမိန့်
အထက်ပါ အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်မျာနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဥပဒေ
မလိုက်နာ မလေးစားပါက လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်
အမိန့်အမှတ် ၅ / ၂၀၂၁”လို့ရေးသားပြီး “ဖိုက်တာကြီး”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက မျှဝေထားရာမှာ ပြန်လည်မျှဝေသူ ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်မျှဝေသူ ၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ တူညီစွာရေးသားမျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်တွေကိုဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ၊ဒီနေရာ၊ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေထုတ်ပြန်နေတဲ့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ချက် တစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရပါဘူး။
ဒီလိုပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ ဉက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက Tomorrow သတင်းဌာနကို ပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)အမိန့်အမှတ် ၅/၂၀၂၁မှာ အတုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းတုဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
”ဒါဟာ တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းအတုပါ။ကျွန်တော် တို့ဆီက ဘာအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှမရှိပါဘူး”
မူရင်းလင်ခ့် – Tomorrow News Journal | Archive link
၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၈ မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့်တိုင်အောင် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ လက်ရှိအာဏာရပါတီ၊ တပ်မတော်တို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတုသတင်းမှားတွေ ဆက်တိုက် ဖြန့်ဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှာ သက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ၂ လအုပ်ချုပ်မယ်လို့ သတင်းတုသတင်းမှားဖြန့်ခဲ့တာကို Fact Crescendo Myanmar က အချက်အလက်စိစစ်ထားတာကို ဒီလင့်ခ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအပြည့်ချပြီး UEC ကို ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမူအတွက် စစ်ဆေးနေပြီလို့ သတင်းမှား ဖြန့်ခဲ့တာကို ဒီလင့်ခ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က အာဏာသိမ်းဖို့ပြောတယ်လို့ သတင်းတုဖြန့်ခဲ့တာကို ဒီလင့်ခ်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)အမိန့်အမှတ် ၅/၂၀၂၁ နဲ့ အစိုးရမဖွဲ့ဖို့၊ လွှတ်တော်မခေါ်ဖို့ တားမြစ်တယ်ဆိုပြီး မျှဝေနေတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ သတင်းတုသတင်းမှား ဖြန့်ဝေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Title:အစိုးရမဖွဲ့ဖို့ လွှတ်တော်မခေါ်ဖို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးအမိန့်ပေးတယ်လို့ သတင်းတုသတင်းမှားဖြန့်
Tagged Claim Reviewတပ်မတော်လွှတ်တော်